Niche Media | Myanmar Digital Marketing
သင့်ရဲ့ Facebook Group ထဲမှာရှိတဲ့ ပို့စ်တွေကို အစီအစဉ် ကျကျနန ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ ဖတ်ရလွယ်အောင် ထားချင်ပါသလား။ Facebook Groups မှာပါဝင်တဲ့ Units feature က ဒါကို ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီ စာစုမှတဆင့် Facebook Groups မှာ Units တွေ ဘယ်လို ဖန်တီးအသုံးချရမလဲ ဆိုတာကို မိတ်ဆွေ အသေးစိတ် လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
/3September 2019 /0comments
Digital Marketing လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဘယ် Online Platform ကိုသုံးသုံး အဆင်ပြေပါတယ်။ အရေးကြီးတာက SEO လို့ခေါ်တဲ့ Search Engine Optimization ပါ။ အဲ့တော့ ကျွန်တော်အခု မိတ်ဆွေတို့ကို အသုံးဝင်နိုင်မယ့် SEO နည်းဗျူဟာ တချို့ ပြောပြချင်ပါတယ်။
/ 1 August 2019 / 1 comments
ယခုခေတ်မှာဆိုရင်ဖြင့် Online ပေါ်ကို Website တွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု တိုးပေါက်လာပါပြီ။ Online ခရီးသွား အေဂျင်စီတစ်ခုအနေဖြင့် ၎င်းရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ကြော်ငြာနိုင်ဖို့ နည်းပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်မက ရှိနေတတ်ပါတယ်။
အခုရက်ပိုင်းမှာ အသုံးတွင်ကျယ်နေပြီဖြစ်တဲ့ Digital Marketing ဆိုတာ ဘာလဲ။ လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် ဘာကြောင့် မရှိမဖြစ် လိုအပ်လာတာလဲ။ မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ရော ဘယ်လို အသုံးချနိုင်မလဲ။ ကျွန်တော်တို့ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
မြန်မာပြည်သူ ဆယ်သန်းကျော်အသုံးပြုနေတဲ့ Social Media မှာ ချဲ့ထွင်ဖို့အတွက် 1 မိနစ်စာလောက် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သင်သိထားဖို့ အရေးကြီးသော Online Directories ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများနဲ့ အခန်းကဏ္ဍ
ကျွန်တော်တို့ဟာ SEO ဆိုရင် Google ကိုပဲ ချက်ချင်းသွားမြင်တတ်ကြပါတယ်။ Google မှာ ရိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါ ထွက်ကျလာမယ့် Results တွေအကြားမှာ First Page မှာပါဝင်ဖို့ကို ကြိုးစားတာလောက်ပဲ အားလုံး အသိများကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်...
ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ သတိထားစောင့်ကြည့်သင့်တဲ့ Tripadvisor ရဲ့ 1000% အကျိုးသက်ရောက်မှု
မိတ်ဆွေရဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို Travel Booking Website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TripAdvisor မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ အချိန်ဆယ်မိနစ်မျှ ဝင်ရောက်ဖတ်ရူပြီး မိမိလုပ်ငန်းကို သုံးသပ်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
Domain Name ရွေးချယ်တဲ့အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် အချက် 10 ချက်
မိတ်ဆွေအနေနဲ့ Website တစ်ခုရေးဆွဲတော့မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးစဉ်းစားရမှာက Domain Name ပါ။ Domain Name ဆိုတာ သင့်ရဲ့ Website Address ဆိုလည်းဟုတ်ပါတယ်။ Website အတွက် Domain နာမည် ရွေးချယ်ခြင်းဟာ Company နာမည် ရွေးချယ်ခြင်းလိုမျိုး အရေးကြီးပါတယ်။
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Website မှ ပေးစွမ်းမယ့် အကျိုးကျေးဇူး 12 ချက်
မိတ်ဆွေရဲ့ လုပ်ငန်းအတွက် Website တစ်ခု အမှန်တကယ် လိုအပ်တာ သေချာရဲ့လား ? တကယ်လို့သာ Webiste ပြုလုပ်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေ ရှိလာနိုင်လဲ ? ကုန်ကျစရိတ်ပိုင်းကိုရော ဘယ်လိုထိန်းချုပ်နိုင်သလဲ ?
အသေးစားလုပ်ငန်းနှင့် Digital နယ်နိမိတ်တွင်းသို့ ခြေတစ်လှမ်းကျွံဝင်ခြင်း
မိတ်ဆွေရဲ့ အလားအလာရှိတဲ့ ဖောက်သည်တွေက Online ပေါ်မှာ ရှိနှင့်နေတာ ကြာရောရှိပါပြီ။ သူတို့အနေနဲ့ မိတ်ဆွေလိုမျိုး လုပ်ငန်းတခုနဲ့ ကျွမ်းဝင်နှင့်နေနိုင်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် သူတို့ သင့်ကို အလွယ်တကူ ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင် အခြားတခုကို ရွေးချယ်သွားကြမှာပါ။